गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर जयपृथ्वी राजमार्ग मर्मत गरिदै ! « News24 : Premium News Channel
गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेर जयपृथ्वी राजमार्ग मर्मत गरिदै !
बझाङ, ८ माघ । बागथलादेखि भोपुरसम्मको जयपृथ्वी राजमार्गमा कालोपत्रे गर्ने क्रममा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको भन्दै स्थानीयले चासो राखेका छन् ।
आज केही युवाहरुले सडक अवलोकन गर्ने क्रममा कमसल सामग्री प्रयोग गरी सडक पिच गर्ने गरेको पाइएको हो । सडक डिभिजन कार्यालय बैतडीले जलजला निर्माण सेवा काठमाडौंलाई उक्त सडक कालोपत्रे गर्ने कामको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
हातले उप्काउन मिल्नेगरी कालोपत्रे गर्न लागेको खबर आएपछि बझाङका युवाहरुले उक्त सडकको निगरानी गरेको थिए । अवलोकन गर्ने क्रममा कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको, वर्षाको समयमा तथा रातारात काम गर्ने गरेको र सडकको धुलोलाई सफा नगरी अलकत्रा विच्छ्याइएको पाइएको स्थानीय असोक मल्लले बताए ।
राज्यको रकमलाई यसरी दुरुपयोग नगर्न निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिलाई अनेरास्ववियूका नेता पुष्पलाल रोकायाले सुझाव दिएका छन् । कमसल निर्माण सामग्रीलाई हटाएर तुरुन्त गुणस्तरीय काम नगरे त्यसको प्रतिफल निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीले नै ब्यहोर्नुपर्ने रोकायाले चेतावनी समेत दिएका छन् ।
अहिलेसम्मको काम टालाटुली बटुली जस्तै भएको भन्दै युवाहरुले सडकमा टाल्ने काम बाहेक अरु काम नभएको बताएका छन् । सडक मर्मतका लागि भन्दै आएको बजेट सकाउनका लागि जनताको आखाँमा छारो हाल्ने काम बाहेक अन्य उपलब्धि नभएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता नरेन्द्र खड्काले बताए ।
सडकको स्टिमेट भन्दा कम खर्च लाग्ने गरी गुणस्तरहीन सडक निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको बेला जिल्लामा सम्बन्धित निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन । सडक पिच गर्दा रिसोलिङ पिच गर्नुपर्ने ठाउमा गिट्टी नराख्ने गरेको र मात्रा अनुसार अलकत्रा प्रयोग नगरी सडक कालोपत्रे भइरहेको छ ।
साथै सडक मर्मतका बेला सडकलाई फराकिलो गरेर कालोपत्रे गर्नुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएको पाइएको हो । यता कालोपत्रेको काममा गल्ती भएकोे निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि हरिप्रशाद खनाल स्वीकार गरेका छन् ।